Alaskan Malamute မှပိုင်ရှင်တိုင်း၏အဆုံးစွန်လမ်းညွှန် - Breeds
Alaskan Malamute ဖောက်ရန်ပိုင်ရှင်၏အဆုံးစွန်လမ်းညွှန်
ချစ်ခင်စွာခေါ်တော်မူ ဘေးဥပဒ်များ , Alaskan Malamute တစ်ခု impose ဖောက်သည်နှင့်ဖြစ်ပါတယ် အကြီးဆုံး spitz-type အာတိတ်ခွေးတစ်ကောင် ။
၎င်းတို့တွင်ဝံပုလွေကဲ့သို့သောလက္ခဏာများရှိပြီးအကွာအဝေးကိုသွားရန်လေးလံသောအလုပ်လုပ်ခွေးများဖြစ်ကြသည်။ သို့သော်မိသားစုကို ဦး စားပေး Malamute သည်သင်၏အထုပ်ထဲတွင်ပါ ၀ င်သလား။ scrolling giaand ထွက်ရှာပါ။
သမိုင်း - Alaskan Malamutes ဘယ်ကလဲ။
Alaskan Malamute ဘယ်လိုပုံလဲ
Alaskan Malamutes ကောင်းသောမိသားစုခွေးဖြစ်ပါသလား
သင့်ရဲ့ Alaskan Malamute ဂရုစိုက်
ကျန်းမာရေး - Alaskan Malamute ဘယ်လောက်ကြာကြာအသက်ရှင်နေထိုင်မှာလဲ။
Alaskan Malamute ဘယ်လောက်ကျလဲ။
Alaskan Malamute အကြောင်းအချက်အလက်များနှင့်ပေါ်လွင်ချက်များ
Alaskan Malamutes ၏ Pros & Cons များကိုဖြိုခွဲခြင်း
နောက်ထပ်စာဖတ်ခြင်း: Alaskan Malamute ရောနှောခြင်း
ဖြစ်ခြင်း အသက်အကြီးဆုံးခွေးဝတ်ရည်တစ်ခု က Alaskan Malamutes Paleolithic ခေတ်ကနေအစပြုသည်ဟုယုံကြည်ရဲ့။ ဒါကအနည်းဆုံးလွန်ခဲ့တဲ့နှစ်ပေါင်း 10000 ပဲ!
သူတို့၏အမည်မှာ“ Mahlemiut” ဟုအမည်ရသောအမည်ခံ Inuit မျိုးနွယ်မှဆင်းသက်လာခြင်းဖြစ်သည်။ သူတို့ကဖောက်တီထွင်ထုတ်လုပ်နိုင်ခဲ့သည် တံဆိပ်ခတ်ခြင်းနှင့်ဝင်ရိုးစွန်းဝက်ဝံများကိုလိုက်ရှာခြင်း၊ ။
အရွယ်အစားရှိသော်လည်းသစ္စာစောင့်သိပြီးနူးညံ့သိမ်မွေ့သောသူကသူတို့၏လူ့မိသားစုများနှင့်နီးကပ်စွာနေထိုင်သည်။ ကံမကောင်းစွာပဲသူတို့ နီးပါးမျိုးသုဉ်းသွား၏ 1896 ၏ရွှေအလုအယက်ကာလအတွင်း။
ခွေးပြိုင်ပွဲများသည် Vogue တွင်ရှိပြီးမြန်ဆန်သောခွေးတစ်ကောင်ကိုဖန်တီးရန် Alaskan Malamutes ကိုအခြားမျိုးဆက်များနှင့်ဖြတ်ကျော်ခဲ့သည်။ ဤသည် Malamute သွေးထွက်သံယို diluting မှ ဦး ဆောင်ခဲ့သည်။
ဒီမျိုးပွားမှုကိုအာသာဝေါလ်ဒန်လို့ခေါ်တဲ့လူတစ်ယောက်ကကယ်တင်ခဲ့တယ် Kotzebue Malamutes ။ ဤသည်သတ်သတ်မှတ်မှတ် strain တစ်မစ္စစ် Ava Seely မှလွန်ခဲ့သည်, ပြီးတော့နှစ်ခုသည်အခြားမျိုးကွဲပေါ်ထွန်း - M'Loot နှင့် Hinman ။
ဒုတိယကမ္ဘာစစ်အတွင်းတွင် Mals သည်ကုန်တင်ကုန်ချခြင်းနှင့်ရှာဖွေခြင်းနှင့်ကယ်ဆယ်ခြင်းတို့တွင်အသုံးပြုသည်။ အန္တာတိကသို့လေ့လာရေးခရီးစဉ်အတွင်းနိုင်ငံရေးပconflictိပက္ခများကြောင့်ထိုခွေးများသည်ဖျက်ဆီးခံခဲ့ရသည်။
သူတို့ဖျက်ဆီးခံရပြီးတဲ့နောက်မှာ 'Kotzebue' strain ကိုဒီအဆင့်အထိအသိအမှတ်ပြုထားတဲ့ American Kennel Club (AKC) ဟာမျိုးကွဲသုံးမျိုးစလုံးအတွက်မှတ်ပုံတင်ခြင်းကိုပြန်လည်ဖွင့်လှစ်လိုက်သည်။
Malamutes ၎င်း၏ခံနိုင်ရည်နှင့်အချိန်စမ်းသပ်မှုသက်သေပြခဲ့ကြသည်။ ယနေ့ Mals အားလုံးမှဆင်းသက်လာကြသည် Bras Coupe ၏ Ch Toro ရန် အားလုံးသုံးမျိုးကွဲများ၏ပေါင်းစည်းရေး ။
အချိန်အများစုမှာ Malamutes မကြာခဏ၎င်း၏အဖြစ်မှားနေကြသည် ဆိုက်ဘေးရီးယား Husky ဝမ်းကွဲပေမယ့် သူတို့ကွဲပြားခြားနားသောဝတ်ရည်ပါပဲ ။
AKC ရဲ့နှုန်းအဖြစ် breed စံ , Alaskan Malamutes ကောင်းစွာကြွက်သားနှင့်မာနထောင်လွှားရပ်တည်ချက်နှင့်အတူနက်ရှိုင်းသောရင်ဘတ်ခွေးဖြစ်ကြသည်။ သူတို့၏ကျယ်ပြန့်သောခေါင်းပေါ်တွင်တြိဂံနားများနှင့်ကြီးမားသောနှုတ်ခမ်းကြီးများရှိသည်။
သူတို့မှာမျက်လုံးပြာပြာလည်းရနိုင်မလားလို့သင်စဉ်းစားနေရင်အဲဒါကို 'အရည်အချင်းမပြည့်မှီသောအမှား' လို့သတ်မှတ်တယ်။ သူတို့၏ပျားရည်ပုံသဏ္eyesာန်သည်အညိုရောင်သို့မဟုတ်အမှောင်ဖြစ်သင့်သည်။
သင်ခွေးပြပွဲများအတွက် Mal ရဖို့စီစဉ်နေလျှင်ဤသည်ကိုသတိရဖို့တစ်ခုခုပါပဲ။
မမေ့ပါနှင့် - ဝံပုလွေများနှင့်တူသောခွေးများ
ပျမ်းမျှအမြင့် & အလေးချိန်တစ်ခု Alaskan Malamute
လူတစ် ဦး ၏ဘေးတွင်ရပ်နေသည့်အရွယ်ကြီးသော Malamute ကိုသင်တွေ့သောအခါမည်သူမဆိုကြောက်လန့်စေနိုင်သည်။ အခြားမျိုးစိတ်များကဲ့သို့ပင်, ဒီ pooch လိင် dimorphic ဖြစ်ပါသည် - အမျိုးသမီးများသည်ယောက်ျားများထက်အနည်းငယ်သေးငယ်သည် ။
စံအရွယ် Malamutes အကြားရပ်တယ် 23 နှင့် 25 လက်မ (58 နှင့် 63.5 စင်တီမီတာ) ပခုံးမှာနှင့်အလေးချိန် 75 မှ 85 ပေါင် (၃၄ မှ ၃၉ ကီလိုဂရမ်) ။
သူတို့ကပိုကြီးတဲ့အရွယ်အစားလာကြ၏။ သငျသညျaမြင်ကြပြီပေမည် iantရာ Alaskan Malamute ဖေ့စ်ဘွတ်ခ်သို့မဟုတ် Instagram တို့ပေါ်တွင် မူတည်၍ အလေးချိန်ပေါင် ၁၉၀ ကျော် (၈၆ ကီလိုဂရမ်) ဖြင့် ၃၅ လက်မ (၈၉ စင်တီမီတာ) အထိကြီးထွားနိုင်သည်။
အသေးအဖွဲ Alaskan Malamutes ကော? Alaskan Klee Kais အသေးစားဗားရှင်းများအဖြစ်စျေးကွက်တင်ခဲ့ကြသည်, ဒါပေမယ့်သူတို့ကတကယ်တော့နှစ်ခုကွဲပြားခြားနားသော Huskies ရောနှောပါပဲ။
သငျသညျစံသို့မဟုတ်gရာမ Malamute ကိုသွားပဲဖြစ်ဖြစ်, ဒီ doggo တိုက်ခန်းများနှင့်အတူပျော်ရွှင်လိမ့်မည်မဟုတ်ပေ ။ လွတ်လပ်စွာကစားနိုင်သည့်ကျယ်ဝန်းသည့်အိမ်တွင်နေထိုင်သင့်သည်။
Coat & Colour: Alaskan Malamutes hypoallergenic လား။
အဘယ်သူမျှမ, သူတို့မတည့် - ဖော်ရွေမဟုတ်ပါဘူး။ Mals တစ်နှစ်ပတ်လုံးအတန်အသင့်သွန်းလောင်းခဲ့သည် ရာသီအလိုက်သူတို့ရဲ့အင်္ကျီကိုမှုတ်။
သူတို့ကတစ် ဦး ရှိသည် နှစ်ဆအင်္ကျီကို အထူနှင့်အလွန်အကျွံရှည်လျား topcoat နှင့်အဆီပြန်အဖြစ်ဖော်ပြမယ့်သိုးမွှေး, ရေတွန်းလှန် undercoat ၏ဖွဲ့စည်းထားတယ်။
Alaskan Malamutes တွင်အရောင်အမျိုးမျိုးရှိသောအရောင်အသွေးစုံသည့်အမွေးများရှိသည် အနက်ရောင်၊ အနီရောင်နှင့် Sable အရိပ်များဖြင့်မီးခိုးရောင်ရှိသည့်အဖြူရောင်မျက်နှာအမှတ်အသားများဖြင့်ပေါင်းစပ်ထားသည် ။ လိုက်လျောညီထွေဖြစ်ရပ်များအဘို့, ခွင့်ပြုတစ်ခုတည်းသောအစိုင်အခဲအရောင်အဖြူသည်။
လက်မလျှော့ပါနှင့် - ရှားရှားပါးပါး White Malamute အကြောင်းသိရန်သင်လိုအပ်သည်
သငျသညျအစွမ်းထက်နှင့်တာရှည်ခံဖြစ်ခြင်း၏ဤခွေးတစ်ကောင်ရဲ့စရိုက်များမသွားပါစေပါနဲ့။ ဒီသန့်စင်သောပိုင်ရှင်အတော်များများကပိုင်ရှင်များသည်၎င်းကိုပိုင်ဆိုင်ကြောင်းသင်ပြောပြလိမ့်မည် ခွေးကြီးတစ်ကောင်ကိုဂရုစိုက်သည့်အတွေ့အကြုံရှိသောမိသားစုများအတွက်အိမ်မွေးတိရိစ္ဆာန် ။
သူတို့က pack ကို၏ alpha အဖြစ်ထည့်သွင်းစဉ်းစားနိုင်တစ်ခုမှာ။
Alaskan Malamutes အန္တရာယ်ရှိပါသလား
အမဲလိုက်နောက်ခံရှိသည့်မည်သည့်အိမ်မွေးတိရစ္ဆာန်ကိုမဆိုကြိုတင်မခန့်မှန်းနိုင်သလိုရန်လိုတတ်သည်။ သို့သော်ယခုအချိန်အထိသင့်တင့်လျောက်ပတ်သောလေ့ကျင့်မှုနှင့်အစောပိုင်းလူမှုအသိုင်းအ ၀ န်းကဤပြissueနာကိုဖြေရှင်းနိုင်ပုံရသည်။
အံ့သြစရာကောင်းတာကသင်ဟာ Alaskan Malamute ကိုသူတို့ခွေးဖြစ်လို့အစောင့်ခွေးဖြစ်ဖို့မမှီနိုင်ဘူး အရမ်းဖော်ရွေ ။
အချို့လူများက Alaskan Malamute ကိုနွားမွေးမြူနိုင်သည့်နူးညံ့သိမ်မွေ့သောကုမ္ပဏီကြီးများဖြစ်သည်ဟုယူမှတ်ကြသည်။ Niko နှင့် Phil သည်ကြောင် Milo နှင့်မည်သို့ဆက်ဆံသည်ကိုဤဗီဒီယိုကိုကြည့်ပါ။
သူတို့ကနေဆဲရှိသည် သဘာဝအလျောက်မြင့်မားသောလုယူရာဥစ္စာ drive ကို ထို့ကြောင့်သင်၏သားမွေးကောင်လေးနှင့်အခြားခွေးများ၊ သေးငယ်သောအိမ်မွေးတိရစ္ဆာန်များ၊ အထူးသဖြင့်ကလေးများနှင့်အပြန်အလှန်ဆက်သွယ်မှုကိုအစဉ်အမြဲသေချာစွာစစ်ဆေးပါ။
သင်သည်သင်၏အိမ်မွေးတိရစ္ဆာန်ကိုမိမိကိုယ်ကိုဖျော်ဖြေခွင့်ပြုပါကသင်၏အိမ်ကို ၆ ပေမြင့်သောခြံစည်းရိုးတစ်ခုနှင့်မြေကြီးပေါ်တွင်မြှုပ်နှံထားရန်သေချာစေပါ။
Alaskan Malamutes သည်တူးသူများဖြစ်ပြီးအလွန်တက်နိုင်သည်။ ၎င်းသည်၎င်းတို့ထဲ၌ကြိုးတပ်ဆင်ထားသည့်ပင်ကိုယ်ဗီဇတစ်ခုဖြစ်သည်။ ထို့ကြောင့်သင်သည်ထိုအမူအကျင့်များကို၎င်းတို့ထဲမှလေ့ကျင့်နိုင်ခြင်းဖြင့်သင်နေထိုင်ရမည်ဖြစ်သည်။
Alaskan Malamutes အများကြီးဟောင်ပါသလား
သင်သည်သင်၏ကိုယ်ပိုင် Alaskan Malamute ကိုရယူရန်စီစဉ်နေပါက၎င်းတို့သည်စကားများပြောခြင်းသို့မဟုတ်အော်ဟစ်ခြင်းအားဖြင့်အသံဖြစ်လိုသောဝံပုလွေများနှင့်တူကြောင်းသိရခြင်းသည်အကောင်းဆုံးဖြစ်သည်။
အသံမြည်သည့်အစည်းအဝေးများအတွက်ကြိုတင်ပြင်ဆင်ထားပါ၊ ဘာမှမဖြစ်သည့် ၄ င်းတို့သည် - ဥ, များ၊ အခြားခွေးများဟောင်နေသည့်အချိန် (သို့) သင့်အားစကားပြောနေရုံသာဖြစ်သည်။
ထိုအရာသည်မည်သို့ဖြစ်မည်ကိုစိတ်ကူးတစ်ခုပေးရန်သူ၏လူသားသူငယ်ချင်းနှင့်အတူ Cedar အော်ဟစ်နေသောဤဗီဒီယိုကိုကြည့်ပါ။
သင်ဤဖောက်တစ်ကောင်တည်းမထားခဲ့လျှင်အကောင်းဆုံးဖြစ်လိမ့်မည်။ သူတို့ဟာသူတို့ရဲ့ကိုယ်ပိုင်အသုံးစရိတ်အချိန် relish ပါဘူး အထူးသဖြင့်တစ်နေကုန်သို့မဟုတ်တစ်ရက်ထက်ပိုသောသူတို့သည်ဖျက်ဆီးခြင်းသို့ရောက်လိမ့်မည်။
ဖြည့်စွက်ခြင်း၊ လေ့ကျင့်ခန်းလုပ်ခြင်းနှင့်အစားအစာအပြင် Alaskan Malamutes ဖြစ်ကြောင်းသင်သိသင့်သည် မြင့်မားသောပြုပြင်ထိန်းသိမ်းမှု နှင့်နွေးထွေးသောအရပ်ဌာန၌အငြိမ့်မနေထိုင်နိုင်ပါ။
ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့သူတို့ကအေးခဲနေတဲ့ရာသီဥတုကိုခံရပ်နိုင်ပြီးသူတို့မှာသိပ်သည်းတဲ့ကုတ်အင်္ကျီရှိတယ်၊ ဒီဂရီ ၈၀ ဒီဂရီ (၂၆.၆ ℃) အထက်ကဘာမှသူတို့ကိုမပူပါဘူး။
တစ်ခုက Alaskan Malamute ရဲ့ဖြီးလိမ်းပုံလိုအပ်ချက်များကိုဖြည့်
ပုံမှန်အားဖြင့်, Mals ဖြစ်ဖို့ရှိသည် တစ်ပါတ်နှစ်ခုမှသုံးကြိမ် brushed သို့သော်နွေ ဦး နှင့်ဆောင်း ဦး ရာသီတွင်နှစ်နှစ်တစ်ကြိမ်အရည်ပျော်သောကြောင့်သန့်ရှင်းရေးကိုနေ့စဉ်အသုံးပြုသင့်သည် slicker brush ဒါမှမဟုတ်တစ်ခု undercoat ထွန်ခြစ် သွန်းလောင်း minimize ရန်။
အညီဖြစ်ရပ်များကိုပူးပေါင်းကြောင်း Malamutes အပတ်စဉ်ရေချိုးနေကြသည်, ဒါပေမယ့်အိမ်မွေးတိရစ္ဆာန်များအဖြစ်မကြာခဏအမှုကိုပြုခံရဖို့မလိုအပ်ပါဘူး။ သငျသညျ Malamutes ပုပ်စပ်သောအနံ့ရှိမရှိအံ့ you’re နေလျှင်, သူတို့သည်, သူတို့ရဲ့ကျေးဇူးတင်ပါတယ် အထူးအနံ့မရှိသော၊ ။
အကယ်၍ သင်သည်အေးခဲ။ သို့မဟုတ်သန့်ရှင်းသောဝန်းကျင်တွင်နေထိုင်ပါက၊ သင့်ခွေးကိုတစ်နှစ်မှနှစ်ကြိမ်လောက်ရေချိုးပေးခြင်းသည်လုံလောက်သည် ။
သူမအလုပ်လုပ်နေစဉ်သို့မဟုတ်ကစားနေစဉ်အတွင်းသူမညစ်ပတ်သည့်အခါ၊ ၆ ပတ်မှ ၈ ပတ်အထိဆန့်ထုတ်ပါ ခြောက်သွေ့ရာမှသူမ၏အင်္ကျီကိုကာကွယ်တားဆီးဖို့ဆိတ်ကွယ်ရာ။
ဒီဖြီးလိမ်းပုံကိုပုံမှန်လုပ်ပါ၊ ဒါကြောင့်မင်းကလေးနဲ့အကျွမ်းတဝင်ရှိလိမ့်မယ်။ သငျသညျသူမ၏ယက်တစ်ကိုင်ရသို့မဟုတ်သူမ၏အံသွားတိုက်ခြင်းငှါ, ကြီးမားတဲ့ခွေးနပန်းခံရဖို့ချင်မှာမဟုတ်ဘူး။
အစားအစာ: Alaskan Malamutes အဘယ်သို့စားရသနည်း
သင့်အိမ်မွေးတိရစ္ဆာန်များကိုကျွေးသောခွေးအစားအစာပမာဏနှင့်အမျိုးအစား သင့်အိမ်မွေးတိရစ္ဆာန်၏အလေးချိန်၊ အသက်၊ ဇီဝြဖစ်ပျက်မှုနှင့်ကျန်းမာရေးတို့ကိုအခြေခံသင့်သည် ။
အရည်အသွေးမြင့်ခြောက်သွေ့သော kibbles သည်အကောင်းဆုံးရွေးချယ်မှုတစ်ခုဖြစ်သည်၊ သို့သော်သင်လည်းစမ်းနိုင်သည် ကုန်ကြမ်းအစားအစာ။ အဆိုပါဖမ်း - ကစျေးကြီးသည်ပြင်ဆင်ထားရန်ရှုပ်ထွေးသောနှင့်အချိန်ကုန်။
သင်တို့သည်လည်းအရာသိသင့်ပါတယ် လူ့အစားအစာများ ခွေးတစ်ကောင်များအတွက်လုံခြုံပြီးအန္တရာယ်ကင်းဖြစ်ကြသည်။
Mals များသည်“ လွယ်ကူသောအစားအစာများ” ဟုလူသိများပြီးအနည်းငယ်မျှသာအသက်ရှင်နိုင်သည်။ ခွေးစာခွက် ၂ ခွက်လောက်လုပ်သင့်တယ် , ဒါပေမဲ့သူတို့သင်ဖြစ်ကောင်းနေသောသင်ထက်လျော့နည်းလိုအပ်ပါတယ်, ဒါကြောင့်အပေါ်ဖြတ်ဖို့ကြိုးစားပါ ရယူထားသော အစာမစားအောင်ရှောင်ပါ။
သင့်ရဲ့ Malamute ရဲ့ zoomies နှင့်အတူကိုင်တွယ်
သူတို့မှာစွမ်းအင်တွေရှိတယ်၊ ဆိုလိုတာကရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာနှင့်စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာလှုံ့ဆော်မှုများစွာလိုအပ်လိမ့်မယ်။ ရည်ရွယ်သည် တစ်နေ့အနည်းဆုံး ၁ နာရီမှ ၂ နာရီလေ့ကျင့်ခန်းလုပ်ပါ ။
ဒါပေမယ့်မင်းမှာ Alaskan Malamute ခွေးကလေးရှိတယ်ဆိုရင်၊ အသက်တာ၏သူမ၏ပထမ ဦး ဆုံးနှစ်နှစ်အတွက် overdo ပါဘူး ။ သူမခန်ဓာကိုယ်ရင့်ကျက်ခွင့်ပြုပါ။
၎င်းသည် dysplasia ကဲ့သို့သောရောဂါများကိုကာကွယ်နိုင်သည်။
အလုပ်များကိုကူညီရန်တစ်စုံတစ်ယောက်လိုအပ်ပါသလား။ Malamutes ရည်ရွယ်ချက်ရှိခြင်းကိုချစ် ! သူတို့သည်ပျော်ပျော်ရွှင်ရွှင်ကစားနိုင်ရုံသာမက Skijoring ဖြစ်ရုံသာမကဘဲအလုပ်တစ်ခုကိုလည်းလုပ်နိုင်သည်။
Malamutes တစ်ခုရှိသည်သောကြံ့ခိုင်ခွေးဖြစ်ကြသည် ပျမ်းမျှသက်တမ်း ၁၂ မှ ၁၆ နှစ်အထိရှိသည် ။ pedigree လိုင်းများနှင့်ပတ်သက်။ A ကောင်းဆုံးအရာသူတို့ကသူတို့ predisposed နေသောအရာကိုတစ်ခုထူထောင်စံချိန်ရှိသည်သောကွောငျ့ဖွစျသညျ။
ဒီဗဟုသုတကမင်းကိုကူညီနိုင်လိမ့်မယ် ကာကွယ်တားဆီးရေးအစီအမံ ။
ဒါဟာအတော်လေးကျယ်ပြန့်စာရင်း, ဒါပေမယ့်သင့်ရဲ့ Mal ကဒီရောဂါတစ်ခုသို့မဟုတ်တစ်ခုထက်ပိုသောဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ဖို့အာမခံလိမ့်မည်ဟုမဆိုလိုပါ။
Alaskan Malamutes သည်သွားနှင့်သွားဖုံးတွင်ပျက်စီးယိုယွင်းခြင်းကိုဖွံ့ဖြိုးရန်အခွင့်အလမ်းပိုများသောကြောင့်ပါးစပ်သန့်ရှင်းမှုသည်အလွန်အရေးကြီးသည်။
ကူးစက်ရောဂါသည်သူတို့၏နှလုံး၊ အသည်း၊ ကျောက်ကပ်နှင့်အဆစ်များကိုဒုတိယပြproblemsနာဖြစ်စေနိုင်သည်။ ဒါဟာ ၁ နှစ်မှ ၃ နှစ်အထိပင်သူတို့၏ဘဝကိုတိုစေနိုင်သည် ။
သူတို့ကအစမှကျရောက်နေတဲ့ ခွေးကလေးအံသွားများ - ဘယ်အချိန်မှာခွေးပေါက်စအံသွားမကျကြဘူး။ ပြင်းထန်မှုပေါ် မူတည်၍ ၎င်းကိုဖယ်ရှားရန်လိုအပ်နိုင်သည်။
ဒီမျိုးပွားအကြောင်းကိုတစ်ခုခုကြောင့်ကူးစက်ရောဂါနှင့်ကဲ့သို့ဆိုးဝါးရောဂါများဖြစ်ပေါ်နိုင်စေသည် parvo, ခွေးရူးပြန်ရောဂါနှင့် distemper ။
Alopecia X ဆံပင်ကျွတ်ခြင်းနှင့်ခွေးများကိုသာထိခိုက်စေသည့်အရေပြားရောဂါဖြစ်ပါသည် - ယားယံခြင်းသို့မဟုတ်နာကျင်ခြင်းမရှိပါ။ ၎င်းသည်ပျက်စီးယိုယွင်းစေသောဟော်မုန်းဂလင်းကြောင့်ဖြစ်ပြီး၎င်းသည်လွယ်ကူစွာပိုးသတ်ဆေးဖြင့်ပုံသေတပ်ဆင်နိုင်သည်။
ဤအခြေအနေနှင့် ပတ်သက်၍ ရောဂါရှာဖွေတွေ့ရှိသောမည်သည့်ခွေးတစ်ကောင်ကိုမျှမမွေးသင့်ပါ။
သွပ်တုံ့ပြန်မှုအရေပြား သင်၏ Mal ၏အင်္ကျီကြောင့်သွပ်ချို့တဲ့မှုကြောင့်ညံ့ဖျင်းစွာကြည့်ရှုနိုင်ပြီးကုသနိုင်သည် သွပ်ဖြည့်စွက် ။
အတော်များများ နှင်းခူနှင့်ဆင်တူသော်လည်းခွေးများကိုအထူးသီးသန့်ထားရှိသည်။ သငျသညျအခွံမာကျောပြင်ဆင်ဖာထေးမှုများသတိထားမိပါလိမ့်မယ်နှင့်ယားယံလိမ့်မယ်အလယ်တန်းကူးစက်မှုဖွံ့ဖြိုးနိုင်ပါတယ်။
သင့်ခွေးသည်ထိုအပင်မှကြီးထွားလာနိုင်သည် (သို့) တစ်သက်တာပြproblemနာတစ်ခုဖြစ်နေနိုင်သည်။
မည်သည့်အသက်အရွယ်ပင်ဖြစ်ပါစေအဝလွန်ခြင်းသည်လမ်းလျှောက်ရန်ရုန်းကန်ခြင်းကဲ့သို့သောလက္ခဏာများကိုပိုမိုဆိုးရွားစေနိုင်သည်။ အချို့သောအခြေအနေများတွင်ခွဲစိတ်ကုသရန်လိုအပ်သောကြောင့်စောစောပိုင်းစစ်ဆေးခြင်းသည် ပို၍ ကောင်းသည်။
dwarfism နှင့်အတူ Malamutes မျှော်မှန်းထားသည်ထက်တိုတောင်းပါလိမ့်မည်။ သူတို့မဆိုနာကျင်မှုမခံစားရဘူးသော်လည်း, သူတို့သည် ပုံပျက်သောကြည့်ရှုပါလိမ့်မယ် ။
Alaskan Malamutes ကဲ့သို့စည်ရင်ဘတ်ခွေးများကို predisposed နေကြသည် ဖောင်းသို့မဟုတ်အစာအိမ်လှည့်ကွက် ။ သင်၏ခွေးသည်လေကိုထုတ်လွှင့ ်၍ မရသောကြောင့်၎င်းသည်ဆိုးဝါးနိုင်သည်။
၎င်းအာရုံကြောရောဂါသည်ခွေးများအတွက်ဆိုးဝါးစေပြီးဆက်လက်ရှင်သန်နေသောသူများသည်ပုံမှန်ဘဝများ၌နေထိုင်ရန်အထောက်အကူပြုကိရိယာများလိုအပ်လေ့ရှိသည်။ အားနည်းခြင်း၊ တုံ့ပြန်မှုညံ့ဖျင်းခြင်း၊ ဟန်ချက်ပျက်ခြင်းစသည့်လက္ခဏာများအဖြစ်ခွဲခြားသတ်မှတ်ရန်ခက်ခဲသည်။ အများအားဖြင့်ခွေးရဲ့ပတ်ပတ်လည်ရှစ်ပတ်ကြာသောအခါထင်ရှား ။
သတိထားပါ Polyneuropathy အဖြစ်ကောင်းစွာ။ ၎င်းသည်ပျော့ပျောင်းသော၊ ပြင်းထန်သော၊
သင်၏ယုံကြည်ရသော VET သည်သင်၏အိမ်မွေးတိရစ္ဆာန်အား၎င်းမှတစ်ဆင့်ဆေးထိုးရန်ပေးနိုင်လိမ့်မည်။
Progressive Retinal Atrophy (PRA) နှင့်မျက်စိအတွင်းတိမ်လည်း Alaskan Malamutes တွင်တွေ့ရလေ့ရှိသည်။ နောက်တစ်ခုကိုခွဲစိတ်ကုသမှုပြုလုပ်နိုင်သော်လည်း PRA သည်နောက်ကြောင်းပြန်လှည့ ်၍ မျက်စိကွယ်စေနိုင်သည်။
နာမည်ကြီးမျိုးဆက်များသူတို့မွေးမြူရေးစတော့ရှယ်ယာသူတို့ဒီရောဂါရှင်းရှင်းလင်းလင်းနေသေချာစေရန် PRA များအတွက်မျိုးရိုးဗီဇစမ်းသပ်မှုမှတဆင့်သွားကြောင်းသေချာပါစေ။
နောက်ထပ်အဖြစ်များသောမျက်စိရောဂါကိုခေါ်သည် VKH ရောဂါ ။ နေရောင်ခြည်ကြောင့်ပိုမိုဆိုးရွားလာတာကရောဂါလက္ခဏာတွေထဲကတစ်ခုကတော့သင်၏ Mal ပေါ်ရှိအနက်ရောင်ခြယ်ပစ္စည်းကိုပန်းရောင်သို့ပြောင်းလဲစေသည်။
နေ့ကမျက်စိကွယ်သို့မဟုတ်လည်းရှိပါတယ် Hemeralopia ။ သင်၏အိမ်မွေးတိရစ္ဆာန်သည်နေ ၀ င်ရန်နှင့်နေ့အချိန်၌သာပြproblemsနာများရှိခြင်းကြောင့်သွင်ပြင်လက္ခဏာရှိသည်။ ၎င်းသည်အသက်ရှစ်ပတ်အရွယ်တွင်ဖြစ်လေ့ရှိသည်။
သင်၏ Malamute သည်ဖမ်းဆီးရမိသည့်လက္ခဏာပြလျှင်၎င်းအားထိန်းချုပ်မှုအောက်သို့အမြန်ဆုံးကုသမှုခံယူပါ။
သင်၏ Malamute သည်အစာစားခြင်း၊ သောက်ခြင်းနှင့်ဆီးသွားခြင်းကိုသတိပြုမိလျှင်၎င်းသည်ကိုယ်အလေးချိန်ကျခြင်းနှင့်အတူ Vet သို့သွားရန်စီစဉ်ပါ။
Mals များသည်ရှည်လျားသောသက်တမ်းရှိသည်။ ခွေးအဟောင်းများတွင်ဤကျန်းမာရေးပြissueနာသည်ပုံမှန်ဖြစ်နေသောကြောင့်ဤမျိုးပွားခြင်းကင်ဆာဖြစ်နိုင်ခြေမှာအနည်းငယ်ပိုမိုမြင့်မားသည်။
ဒီသွေးရောဂါကခွေးတွေမှာပုံမှန်မဟုတ်တဲ့သွေးခဲစေတယ်။ Malamutes ကိုသူတို့ကရလာတဲ့အခါမှာရောဂါလက္ခဏာပြလေ့ရှိတယ်။
အချို့ကသူတို့၏အိမ်မွေးတိရစ္ဆာန်သည်ခွဲစိတ်ကုသမှုမခံယူမီသွေးထဲတွင် Hofophilia ရှိကြောင်းသိရှိကြသည်။
ပိုကြီးတဲ့ခွေးတွေကိုအကျိုးသက်ရောက်စေတဲ့အရာတစ်ခုကတော့နှလုံးရောဂါဖြစ်တယ်။ သင့်ရဲ့ Mal ကိုသူမကိုနှစ်စဉ်စစ်ဆေးခွင့်ပြုခြင်းဖြင့်စစ်ဆေးပါ။
Alaskan Malamute ခွေးကလေးသည်မည်သည့်နေရာတွင်မဆိုကုန်ကျနိုင်သည် $ 2,200 နှင့် $ 6,500 ။ စျေးနှုန်းသည်မိဘများ၏မျိုးဆက်၊ မျိုးပွားသူ၏တည်နေရာနှင့်လူကြိုက်များမှုနှင့်ရရှိနိုင်သောကလေးအရေအတွက်ပေါ်မူတည်သည်။
သင်မျှော်လင့်ထားနိုင်ပါတယ် အမှိုက်သရိုက်များတွင်6မှ 8 ခွေးပေါက်စ ဒါပေမယ့်မှတ်တမ်းများရှိခဲ့သည် pups 12 အထိ ။
ပွဲစားခွေးများမှဆင်းသက်လာသူများသည် Malamute အိမ်မွေးတိရိစ္ဆာန်များနှင့်အလုပ်လုပ်သောခွေးများမွေးမြူသူများထက်စျေးကြီးသည်။
ခွေးကလေးတစ်ကောင်အတွက်ပေးဆပ်ခြင်းသို့မဟုတ်စာချုပ်ချုပ်ဆိုခြင်းမပြုမီသူ၏မိဘများနှင့်အမှိုက်သရိုက်များနှင့် ဦး စွာတွေ့ဆုံပါ။ ဤသည်ကသင့်အားခွေးပေါက်စ၏စိတ်ထားနှင့်ရုပ်ရည်ကိုစိတ်ကူးတစ်ခုပေးလိမ့်မည်။
သင်တို့သည်ခွေးများကိုမွေးမြူသူများအနေဖြင့်မွေးဖွားလာချိန် မှစတင်၍ ကျန်းမာနေကြောင်းသေချာစေရန်ခွေးများအားဆေးမှတ်တမ်းများနှင့်အခြားမရှိမဖြစ်လိုအပ်သောစာရွက်စာတမ်းများကိုတောင်းယူနိုင်ပါသည်။
အကယ်၍ သင်က၎င်းကို ဆက်လက်၍ မပြုစုနိုင်လျှင်ခွေးကလေးကိုပြန်ယူမည်လားဟုသင်မေးလျှင်ပိုကောင်းလိမ့်မည်။ တစ် ဦး ကဂုဏ်သိက္ခာရှိတဲ့မျိုးဆက်များမိမိတို့၏ခွေးများကိုထာဝရနေအိမ်ကမ်းလှမ်းဖို့ပျော်ရွှင်ထက်ပိုပါလိမ့်မည်
Alaskan Malamute မျိုးဆက်များ & kennels
သင်သည်သင်၏ကိုယ်ပိုင် Alaskan Malamute ခွေးကလေးကို ၀ ယ်ရန်အဆင်သင့်ဖြစ်နေသည်ဟုခံစားရပါက Mals ရောင်းရန် ၀ က်ဘ်ဆိုက်အနည်းငယ်ရှိသည်။
မြောက်ပိုင်း Lites Alaskan Malamutes (Burton, OH)
ဝိညာဉ်အက Alaskan Malamutes (Alpine, TX)
ဤခွေးကလေးရောင်းသူများအတွက်ကျွန်ုပ်တို့လက်မခံနိုင်ပါ၊ သို့သော်သင်၏သုတေသန လုပ်၍ ပြင်ဆင်ရန်သင့်အားကျွန်ုပ်တို့အကြံပေးပါသည် မေးခွန်းလွှာ သငျသညျတာဝန်ရှိမျိုးဆက်များနှင့်ဆက်ဆံရာတွင်သေချာစေရန်။ သင်အွန်လိုင်းရှိနေစဉ်သင် Mals များကိုလည်းစစ်ဆေးနိုင်သည် AKC ရဲ့စျေးကွက် ။
မွေးစားရန် Alaskan Malamute ခွေး
များသောအားဖြင့် crossbreeds သည်အမိုးအကာများဖြင့်အဆုံးသတ်သော်လည်းအပင်ပေါက်ရန်ကံဆိုးသည်။
ပိုင်ရှင်များတွင် ၀ ံပုလွေကဲ့သို့ခွေးတစ်ကောင်ရှိရန်အေးဆေးမည်ဟုထင်သောကြောင့်အခြားသူများက Malamutes ကဲ့သို့ခွေးများကိုရတတ်ခြင်းမှာအခြားအကြောင်းပြချက်များရှိသည်။
ထို့ကြောင့်ကျွန်ုပ်တို့သည်အိမ်မွေးတိရစ္ဆာန်ကိုရှာသူမည်သူမဆိုအားမွေးစားခြင်းကိုအထူးအကြံပြုလိုပါသည်။ သငျသညျဒီဖောက်တူသောအရာကိုသတိထားမိသူတစ် ဦး ဝါရင့်ခွေးပိုင်ရှင်ဆိုရင်အထူးသဖြင့်လျှင်, သင်လုပ်နိုင်သည် စွန့်ပစ်သားမွေးကောင်းကင်တမန်များဒုတိယအခွင့်အလမ်းပေးပါ ။
Mals အတွက်ဤကယ်ဆယ်ရေးနေရာများကိုကြည့်ပါ။ သူတို့ထဲကအချို့သည်သင်ချစ်စရာကောင်းပြီးသင်၏လူနေမှုပုံစံစရိုက်နှင့်ကိုက်ညီသောကိုယ်ရည်ကိုယ်သွေးနှင့်အတူ Alaskan Malamute ရောနှောခြင်းကိုပင်ဖြည့်ဆည်းပေးသည်။
Moonsong Malamute ကယ်ဆယ်ရေး (Boise, ID)
အီလီနွိုက်ပြည်နယ် Alaskan Malamute ကယ်ဆယ်ရေးအသင်း (Mt. Prospect, IL)
North Carolina မှ Alaskan Malamute ကယ်ဆယ်ရေး (Creedmoor, NC)
Chesapeake Alasရိယာ Alaskan Malamute ကာကွယ်စောင့်ရှောက်ရေး (Berryville, VA)
Alaskan Malamutes သည်ထိပ်ဆုံးခွေး ၁၀ ကောင်တွင်ပါဝင်သည်။ သူတို့ကဝန်ကိုဆွဲနိုင်ပါတယ် အထိ 3,300 ပေါင် (၁၅၀၀ ကီလိုဂရမ်)
သူတို့ဟာအခြားစွတ်ဖားခွေးတွေထက်ပိုနှေးနေပေမဲ့ Malamutes ဟာသူတို့ရဲ့အစွမ်းသတ္တိနဲ့လုံလောက်မှုကြောင့်ရှည်လျားတဲ့အကွာအဝေးကိုသွားနိုင်ပါတယ်
အဆိုပါ Malamute ဖောက် Alaska ရဲ့တရားဝင်ပြည်နယ်ခွေးဖြစ်ပါတယ်။
သင်ကပထမဆုံးအကြိမ်ခွေးပိုင်ရှင်ဖြစ်ပါက Alaskan Malamute မျိုးစိတ်သည်သင်လိုအပ်သောအရာနှင့်ကိုင်တွယ်ရန်စိန်ခေါ်မှုဖြစ်လိမ့်မည်။
ဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့သူတို့ကိုအကြံပေးတာပေါ့ အတွေ့အကြုံရှိပိုင်ရှင်များသည် နှင့်အိမ်မွေးတိရစ္ဆာန်အဖြစ်ခွေးကြီးများရှိခြင်းရန်အသုံးပြုကြသည်မိသားစုများ။
ထို့အပြင်သူတို့ အထူအင်္ကျီများရှိပြီးအအေးခန်းပတ်ဝန်းကျင်တွင်မွေးမြူကြသည် ဒါကြောင့်သူတို့ကပူပြင်းတဲ့ရာသီဥတုအခြေအနေကိုခံရပ်နိုင်လိမ့်မည်မဟုတ်ပေ။ အကယ်၍ သင်သည်အပူပိုင်းဒေသတွင်နေထိုင်သည်ဆိုပါက၎င်းသည်လျှပ်စစ်ဓာတ်အားခများကိုဆိုလိုသည်။
အပြင်စွမ်းအင်မြင့်မားစွာနှင့်တိကျခိုင်မာစွာဖြီးလိမ်းပုံလိုအပ်ချက်များရှိခြင်းအပြင်၊ အစောပိုင်းလူမှုအသိုင်းအ ၀ ိုင်းနှင့်သင့်လျော်စွာလေ့ကျင့်သင်ကြားပေးသော Alaskan Malamute၊ သစ္စာစောင့်သိ cuddle ဝံနေသောအလုပ်ကြိုးစားခွေး ။
ဒီမျိုးပွားအကြောင်းကိုသင်ဘယ်လိုထင်သလဲ မင်း Mal အကြောင်းပြောပြချင်တဲ့ဇာတ်လမ်းရှိလား။ အောက်ဖော်ပြပါထင်မြင်ချက်ကိုချန်ထားခြင်းအားဖြင့်၎င်းအကြောင်းကျွန်ုပ်တို့အားလုံးကိုပြောပြပါ
ဓာတ်ခွဲခန်း Malamute ရောနှော
Husky Malamute ရောနှောခြင်း
23 Alaskan Malamute ရောသမမွှေများ
မင်းရဲ့ခွေးကသူ့ခြေဖဝါးကိုဝါးဝါးနေရတဲ့အကြောင်းရင်း ၈ ချက်
Dog Age Calculator: ခွေးနှစ်ကိုလူ့နှစ်သို့ပြောင်းပါ
Mini Golden Retriever မျိုးစိတ် - အရွယ်အစား၊ စျေးနှင့်ပိုမို ...
350+ Black Dog အမည်များ: Black Dogs အတွက်လှပသောနာမည်များ၏ A-Z
German Shepherd: ပိုင်ရှင်များအသစ်သိသင့်သိထိုက်သည်
စိန့် Berdoodle - အဆိုပါ fluffy, iantရာ & Teddy ထမ်းရွက်စိန့်ဘားနတ် Poodle ရောနှော
ဂျာမန် Shepherd Malamute သည်မျိုးကောင်းတစ်မျိုးရောသလား။
soft coated ဂျုံ Terrier: 'ဆင်းရဲသောသူကိုခွေး' 'တစ် ဦး ကလမ်းညွှန်
white pitbull အတွက်နာမည်
အပြာရောင်နှာခေါင်း pitbull siberian husky ရောနှော